Jonesboro, AR • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Aza adino ny fotoana hamandrihana ny vatanao sy ny fanotra nuru ao Jonesboro, AR,
Jonesboro dia tanàna iray eo amoron'ny Crowley's Ridge eo amin'ny zorony avaratra atsinanana amin'ny Fanjakan'i Arkansas any Etazonia. Jonesboro dia iray amin'ireo seza roa an'ny distrikan'i Craighead. Raha ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2010 dia 67,263 ny mponina ary tanàna lehibe indrindra fahadimy ao Arkansas. Tamin'ny taona 2010, ny faritry ny tanànan'ny tanànan'i Jonesboro dia nisy mponina 121,026 163,116 ary mponina XNUMX XNUMX tao amin'ny faritra statistika natambatra Jonesboro-Paragould. Aza adino ny fotoana famandrihana anao manosotra ny vatana ary fanorana nuru any Jonesboro, AR,